Evergreen Phyo: April 2009
ရိုးသားတဲ့ တစ်ခုတည်းသော ဆန္ဒဘဲ..
Posted by Phyo Evergreen at 11:05 PM 14 comments Links to this post
ငါ့ကို ကြိုဆိုနေပြီ ..
Posted by Phyo Evergreen at 6:55 PM 23 comments Links to this post
ဒီတစ်ခါလည်း အစားအကြောင်းရေးပါတယ်..:) ။ ဒီအကြောင်းပဲကောင်းတယ်လေ.. ပေါ့ပေါ့ပါးပါးနဲ့ ပို့စ်ရေးရတာလည်း အရသာရှိတယ်လေ..။
ဟိုတစ်ရက်က အပြင်သွားရင်း စားဖြစ်တာပါ.. Mee Goreng တဲ့ မြန်မာလိုတော့ မီးဂိုရမ်း လို့အသံထွက်မလားဘဲ..။ တကယ်တော့ ပန်းသေးခေါက်ဆွဲကြော်လိုဟာမျိုးပဲ (တကယ်တော့ ပန်းသေးခေါက်ဆွဲမစားဖူးဘူး.. သူများတွေပြောလို့ သိတာ)။ စင်္ကာပူမှာတော့ မလေးနဲ့ ကုလားလူမျိုးတွေတော်တော်များများစားကြပါတယ်.. တရုတ်တွေလည်းစားတယ် သိပ်စားတာတော့မတွေ့ဘူး။ တစ်ရက်တစ်ရက် စားရတာတွေ ရိုးလာတော့ တခါတလေလည်း အသစ်အဆန်းလေးတွေစားဖြစ်တယ်.. မကြိုက်ရင်ထားခဲ့ ကြိုက်ရင်ဆက်စား နောက်လည်းမှတ်ထားပေါ့..။ ဒီရောက်စတုန်းကတော့ တော်တော်များများ စမ်းစားကြည့်ဖူးတယ်.. မကြိုက်လို့ တစ်ဇွန်းလောက်စားပြီး ထားခဲ့ရတဲ့ အကြိမ်လည်းမနည်းဘူး..။ စားကြည့်ရင်းနဲ့ ကြိုက်သွားတာတွေလည်း ရှိတယ်.. ဥပမာ ဟော်ဖန်း၊ ပန်းမြန့်၊ ဒုံ ၊ မီနီဝေါ့ခ် တို့လိုမျိုးပေါ့..။ ပြောရင်းလမ်းလွဲတော့မယ်.. ဆက်စား အဲ ဆက်ပြောကြစို့..။
ဒီ မီးဂိုရမ်းကို စင်္ကာပူမှာ ကုလားနဲ့ မလေးဆိုင်တော်တော်များများမှာရပါတယ်.. ။ ခေါက်ဆွဲ၊ ပဲပြား၊ ကြက်ဥ၊ ဂေါ်ဖီ တို့ပါပါတယ်..။ အကုန်လုံးကို ဆီနဲ့ တစ်ခါတည်း ရောမွှေကြော်လိုက်တယ်..ထင်တာဘဲ...။အဲဒီဆိုင်တွေမှာတော့စားဖူးတယ်.. မကြိုက်ဘူး.. နီရဲနေပြီး အရသာကလည်း ချိုချိုကြီးဖြစ်နေတယ်.. စပ်လည်းစပ်တယ်.. ကျွန်တော်တော့မကြိုက်ဘူး..။ စားဖြစ်ရင်တော့ တရုတ်ဆိုင်တွေမှာ စားဖြစ်ပါတယ်. အရသာလည်းကောင်းတယ်.. သန့်လည်းသန့်တယ်..(လုပ်နေတာကိုမြင်နေရတာကိုး)။
ခုစားဖြစ်တာက ကိုပီတရမ် မှာပါ.. စားလ်ို့ကောင်းပါတယ်.. ။ ကြက်ဥ ၊ ပဲပင်ပေါက်၊ ပြည်ကြီးငါး၊ ပုဇွန် နဲ့ fishcake ပါတယ်.. ပြီး သံပုရာခြမ်းလေးညှစ်ပြီး စားလိုက်လို့ကတော့ ကောင်းမှကောင်း...။ ၄ ကျပ်ပေးရပါတယ်.. ထပ်များများစားချင်ရင် ၅ကျပ်တန်လည်းရှိတယ်.. အစာပလာတွေပိုများတာပေါ့..။ ကြုံရင် စားကြည့်ကြပေါ့ဗျာ.. စားစရာတစ်ခုတိုးတာပေါ့..။
ထမင်းစားပြီးတော့ ရေခဲခြစ်စားဖြစ်တယ်..။ ဒီမှာလူတော်တော်များများ အစားတစ်ခုစားပြီးရင် အအေးသောက် မသောက်ရင် အပူသောက် မသောက်ရင် ဒီရေခဲဖြစ်စားကြ မစားရင် အသီးစားကြ ပါတယ်..။ ရောက်စကတော့ အကျင့်မဖြစ်သေးဘူး.. နောက်တော့ လိုက်သောက်ရင်းနဲ့ အစားစားပြီးလို့ မသောက်ရင် တစ်ခုခုလိုနေသလိုဘဲ.. ခုတော့ ဖြတ်နေတယ်.. အချိုတွေအရမ်းများနေမှာစိုးလို့..။ ခုစားတာက စတော်ဘယ်ရီ ကစ်စစ် ပါ.. စားလို့ကောင်းတယ်.. အပေါ်မှာ ရေခဲမုန့်လဲပါတယ်..။ စတော်ဘယ်ရီ သေအောင်ကြိုက်တဲ့ကျွန်တော် တွေ့မိတာနဲ့ကို မနေနိုင်ဘူး.. စားဖြစ်သွားတယ်..။ အေးအေးမွှေးမွှေးလေး............... ။
Posted by Phyo Evergreen at 8:01 PM 21 comments Links to this post
ကျွန်တော်နေတာ တိုင်းပြည်ငယ်လေးတစ်ခုမှာပေ့ါ..။ ကမ္ဘာမှာသိတဲ့သူလည်းတော်တော်နည်းလိမ့်မယ်.. ကောင်းကောင်းသိသူများလည်းရှိသလို နည်းနည်းသာကြားဖူးတဲ့သူတွေလည်းရှိမယ်။ တိုင်းပြည်မှာ ဆင်းရဲသူတွေ ချမ်းသာသူတွေ ရိုးသားသူတွေ လှည့်စားတတ်သူတွေ အချိုးကျနေထိုင်တယ်။ ကုန်းတွင်းပိတ်နိုင်ငံလေးတစ်ခုဖြစ်ပေမယ့် တိုင်းပြည်ထဲမှာ မြစ်ချောင်းတွေစီးဆင်းတယ်.. မြင့်မားတဲ့တောင်တန်းတွေ အရှေ့အနောက်ပြေးတယ်.. မှိုင်းညို့ညို့တောအုပ်ကြီးတွေကတော့ ညင်သာစွာလဲလျောင်းလို့လေ..။ တိုင်းပြည်ကို အုပ်မိုးထားတဲ့ကောင်းကင်ကြီးကတော့ အမြဲလိုလို အုံ့ဆိုင်းလို့ ..နေခြည်တွေကလည်း တိမ်တွေအောက်ခိုအောင်းလို့။ အေးစိမ့်တဲ့ ရာသီဥတုရှိတဲ့ဒီနိုင်ငံမှာ ပြာလွင်တဲ့ကောင်းကင်နဲ့ နေခြည်နွေးနွေးကို အတန်းအစားမရွေးမက်မောတောင့်တကြတယ်.. ဒါဆန်းသလား ..အဲဒီထဲမှာ ကျွန်တော်တစ်ယောက်လည်းအပါအ၀င်ပဲလေ..။
အဲ့ဒီနေ့ကို ကျွန်တော်ကောင်းကောင်းမှတ်မိတယ်.. ဘယ်တော့မှမမေ့ဘူးလို့လည်းပြောလို့ရတယ်။ ညကကောင်းကောင်း အင်းအိပ်ပျော်တယ်ဘဲဆိုပါတော့ မနက်ကျတော့ စောစောနိုးလာတယ်..။ မနက်(၇)နာရီကိုစောတယ်လို့ ပြောလို့ရလား.. ကျွန်တော့်အဖို့တော့ စောပါတယ်။ ကိုယ်လက်သန့်စင်ပြီး ပြတင်းတံခါးကိုဖွင့်လို့ ကောင်းကင်ကိုကြည့်လိုက်တော့ အရင်ရက်တွေအတိုင်းမပြောင်းလဲစွာ မှိုင်းမှောင်လို့... လေတစ်ချက်အတိုက်မှာတော့ ပြတင်းပေါက်ကိုအမြန်ပိတ်လိုက်ရတဲ့ အထိဘဲ။ လုပ်နေကျ လေ့ကျင့်ခန်းလေးတွေလုပ်ပြီး နာရီကြည့်တော့ (၈)နာရီကို (၅)မိနစ်စွန်းနေပြီ..။ ပိတ်ရက်တိုင်း အပြင်မှာစားဖြစ်တဲ့ကျွန်တော် မနက်စာစားဖို့ အင်္ကျီထူထူထပ်ဝတ်ပြီး အပြင်ထွက်ခဲ့တယ်..။
လမ်းပေါ်ရောက်တော့ လူတွေရှင်းနေသလိုထင်ရပေမယ့် လမ်းသွားလမ်းလာတွေက ဟိုဟိုဒီဒီသွားလာလျက်.. စိတ်ထင်တာပဲဖြစ်မှာပါ။ လမ်းထိပ်ကသတင်းစာဆိုင်လေးမှာ မနက်စောစောမို့လူတွေအုံနေပြီ.. ဆိုင်ရှင် အဖိုးကြီးတော့ လူတွေဆီကပိုက်ဆံသိမ်းရတာနဲ့ တစ်ယောက်တည်းအလုပ်ရှုပ်နေပြီပေါ့။ ဗိုက်တော့နည်းနည်းဆာနေပြီ အပြန်ကျမှဘဲဝင်တော့မယ်လေ.. သတင်းစာတော့ချန်ထားပေးမှာပါ.. ။ ကျွန်တော်နေ့တိုင်းသတင်းစာအလကားဖတ်ရတယ်လေ.. ဘယ်သူရှိမလဲ ဆိုင်ရှင်အဖိုးကြီး အလကားပေးတာပေါ့..။ အမြဲကြုံတိုင်း သတိတရမုန့်တွေဝယ်သွားပေးသူနဲ့ နေ့စဉ်သတင်းစာတွေပြန်ပေးသူနဲ့ မေတ္တာတွေဖလှယ်ခဲ့တာ နှစ်ကြာပြီလေ။ ပြောရင်းဆိုရင်း သူကအတင်းလာပေးနေလို့ တစ်ခါတည်းယူလိုက်ရတယ်။ ဒီလိုနဲ့ နှစ်လမ်းကျော်က ကော်ဖီဆိုင်လေးဆီဆက်လျှောက်လာဖြစ်တယ်...။
အဲဒီဆိုင်လေးက အပြင်အဆင်သပ်သပ်ရပ်ရပ်နဲ့ လမ်းမဘေးမှာရှိတာကြောင့် အမြဲထိုင်ဖြစ်တယ်လေ။ လမ်းသွားလမ်းလာတွေကိုလည်း ငေးမောရင်း ကော်ဖီသောက်လို့ရတယ်..။ အဖျော်ကောင်းတဲ့ကော်ဖီကြောင့် ထိုင်ဖြစ်တာဆိုတာကိုတော့ ပြောပြဖို့မလိုတော့ပါဘူးလေ။ အိုး....ဆိုင်ရှေ့ရောက်တော့ လူတွေအများကြီးပါဘဲလား.. လမ်းမပေါ်မှာ မတွေ့တဲ့သူတွေဒီရောက်နေသလားပဲ..။ အင်းလေ အေးစိမ့်စ်ိမ့် နံနက်ခင်းမှာ ပူနွေးနွေးကော်ဖီတစ်ခွက်တော့ လူတော်တော်များများတောင့်တကြမှာဘဲ..။ ကံကောင်းစွာ ဆိုင်အပြင်ဘက်လမ်းထောင့်မှာ နှစ်ယောက်ထိုင်စားပွဲတစ်ခုလွတ်နေသေးတယ်..။ ခပ်မြန်မြန်ဘဲ ကော်ဖီတစ်ခွက်နဲ့ ပေါင်မုန့်မီးကင်နှစ်ချပ် မှာလိုက်တယ်။
အစားစားနေရင်းနဲ့ သတင်းစာကို ကောက်လှန်မိတယ်.. အစားစားရင်း စာဖတ်တတ်တာလည်းအကျင့်တစ်ခုဘဲ။
ဒီရက်ပိုင်း မတော်တဆဖြစ်မှုတွေနဲ့ သတင်းထူးတွေကလည်းအများသား..။ ဘယ်လောက်အာရုံစိုက်မိနေလဲတော့မသိ.. အနားက စကားပြောသံကြားမှဘဲ သတိဝင်လာမိတယ်။ စကားသံဝဲ၀ဲနဲ့ ဦးလေးအရွယ်လူကြီးတစ်ယောက်ပါ..။
“အိုး သိပ်ရတာပေါ့ ထိုင်ပါ”
“အတွင်းဘက်ရော အပြင်မှာပါထိုင်ခုံတွေကပြည့်နေတော့လေ.. ကံကောင်းလို့ ဒီမှာတစ်ခုံလွတ်နေတာကို တွေ့တယ်”
ကျွန်တော် အသာပြုံးပြလိုက်သည်...။ ထိုလူ၏အပြုံးကို မြင်လိုက်ရတော့ အနှစ်နှစ်အလလ ပျောက်ဆုံးနေသော အရာတစ်ခုကို ပြန်တွေ့လိုက်ရသလို ခံစားမိသည်။
ကြာကြာမတွေးဖြစ် ဖတ်လက်စ သတင်းစာကို ကောက်ကိုင်ပြီး သတင်းတွေဖတ်မိသည်..။ တစ်မိနစ်လောက်ဘဲ ကြာမည်.. ကျွန်တော့်ကိုစကားဆိုလာသည်..။
“သား သတင်းစာကိုနောက်မှဖတ်လေ ကော်ဖီနဲ့ မုန့်စားလိုက်အုံး အေးကုန်တော့မယ်”
သား ဟုခေါ်လိုက်ပုံက ရင်းနှီးလွန်းလှပြီး ကျွန်တော့်ရင်ထဲနွေးထွေးလွန်းလှသလို။ ဒီလိုမျိုး အခေါ်ခံရတာ တစ်သက်လုံး မကြားဖူးသေးတာကြောင့်လည်းဖြစ်ပါမည်။
ရိုသေလေးစားသမှုနှင့် ကျွန်တော့်မနက်စာကို အပြီးစားလိုက်သည်။
စားရင်းနှင့်ပင် ထိုလူကြီးနှင့် စကားလက်ဆုံကျမိသည်။ သူလည်းကျွန်တော့်လိုပင် ဒီကော်ဖီဆိုင်လေးမှာ မနက်တိုင်းလိုလို ထိုင်ဖြစ်ကြောင်းပြောသည်.. ပြီးတော့ အလုပ်အကိုင်တွေအကြောင်းပေါ့..။ သူပြောမှ မျက်နှာကို စေ့စေ့ကြည့်တော့ မြင်ဖူးနေသလို..။ သူ့မျက်နှာမှာတော့ ကြေကွဲဝမ်းနည်းရိပ်တွေထင်နေသည်..။ ကျွန်တော်စကားစမိသည်..
“ခုတစ်လော စိတ်ဖိစီးမှုတွေများနေတယ်ထင်ရဲ့ အဆင်မပြေဘူးလား”
“ကျွန်တော်များ မျှဝေခံစားပေးနိုင်ရင် ကောင်းမလားမသိဘူး.. ရင်ဖွင့်ချင် ဖွင့်ပြောလိုက်ပေါ့ဗျာ... အနည်းအကျဉ်းတော့ သက်သာသွားမှာပါ”
“အမှန်က ကျွန်တော်လေ သားနဲ့ဇနီးကို သိပ်သတိရတယ်... နေ့စဉ်ရက်ဆက်ဘဲ..”
“မိသားစုနဲ့ ကွဲနေခဲ့တာနှစ်ပေါင်း နှစ်ဆယ့်ခြောက်နှစ်ရှိပြီ.. သိပ်ကိုသတိရတယ်” ဟုရီဝေစွာပြောလေသည်။။
“သားမွေးပြီး သ်ိပ်မကြာဘူးလေ အိမ်ထောင်ဘက်နဲ့ ကွဲသွားခဲ့တယ်... သားကိုလည်း အမေနဲ့သာထည့်လိုက်ရတာပေါ့” ..လို့ ကြေကွဲစွာပြောတယ်..။
“ကျွန်တော် စိတ်မကောင်းပါဘူး ခင်ဗျာ”....
စကားပြောကြရင်းမှ သိလာတာက အိမ်ထောင်ကွဲပြိုရခြင်းအကြောင်းရင်းဟာလည်း သူ့အမှားတွေသာဖြစ်ကြောင်း၊ နောက်ပိုင်းပြန်ပေါင်းစည်းဖို့လည်း ကြိုးစားခဲ့ကြောင်းတွေပြောပြသည်။
“တစ်နှစ်လောက် အကြာဇနီးသည်ဆီဆက်သွယ်ကြည့်တော့ အတွေ့မခံဘူး.. သားအကြောင်းမေးတော့ သားလေး ဆုံးပြီ ဦးနှောက်အမြှေးရောင်ရောဂါနဲ့တဲ့လေ..”
“ခုရှိမယ်ဆိုရင်တော့ ဒီကလူလေးအရွယ်နဲ့ မတ်ိမ်းမယိမ်းပေါ့”
“တကယ်မယုံနိုင်ဘူးဗျာ သားအတွက်ဘာမှမလုပ်ပေးနိုင်ခဲ့ဘူး..နောက်ဆုံး သားနာမည်လေးနဲ့ အမှတ်တရကျောက်တိုင်လေးတစ်ခုကလွဲလို့ပေါ့”
အင်း ဒီအကြောင်းလေးတော့ အိမ်ရောက်မှအမေ့ကိုပြန်ပြောရမယ်.. အမေ့တော့ကြားပြီး စိတ်မကောင်းဖြစ်မှာသေချာတယ်..။ ခုမှစတင်ခင်မင်မိသူနဲ့ ကျွန်တော့်တို့ စကားတွေအများကြီးဆက်ပြီးပြောခဲ့ကြတယ်...။ ကျွန်တော်အကြောင်းမေးတော့ သိပ်များများစားစား ပြန်မပြောပြဖြစ်ခဲ့ဘူး..။ အဖေဆုံးသွားတာရယ်... အမေနဲ့ အတူနေနေတာတွေမပြောဖြစ်ပဲ ကျွန်တော်တက်နေတဲ့ကျောင်းကအကြောင်းတွေရယ်... ကျွန်တော်ဖြစ်ချင်တာတွေကိုပဲ များများပြောဖြစ်ခဲ့တယ်။
“စကားပြောတာလည်း တော်တော်ကြာပြီ.. ကျွန်တော်အလုပ်နည်းနည်းရှိလို့ ခွင့်ပြုပါ..” လို့ ကျွန်တော်နှုတ်ဆက်လိုက်တော့......
“နှစ်သက်ဖွယ်ကောင်းတဲ့နေ့ရက်တွေ ပိုင်ဆိုင်ပါစေ.” အပြန်အလှန်ဆုတောင်းပေးကြသည်..။
အချိန်တော့နည်းနည်းနောက်ကျနေပြီ.. လမ်းအမြန်လျှောက်ပြီး သတင်းစာဆိုင်နားရောက်မှ သတိရသည်...။ စကားတွေသာပြောဖြစ်ကြသည် .. နာမည်မေးဖို့ကျတော့ နှစ်ယောက်စလုံးမေ့နေခဲ့သည်..။ အင်းထားပါတော့လေ.. နောက်လည်းတွေ့ချင်မှတွေ့မှာပါ... ....။ ထိုနေ့က ကောင်းကင်သည်... ထူးဆန်းစွာအမှန်ပင်ကြည်လင်သာယာခဲ့သည်.......။
လတွေကြာသွားသည်....... မေလထဲကတစ်ရက် အဖေဆုံးတာနှစ်ပတ်လည်မို့ အဖေ့အုတ်ဂူလေးရှိရာ သင်္ချိုင်း ဆီတစ်ယောက်တည်းရောက်သွားသည်... အမေတော့မပါခဲ့ ..ဘယ်တော့မှလည်းမပါခဲ့ပါ..။ အဖေ့အုတ်ဂူလေးကို သန့်ရှင်းပေးပြီး ပန်းစည်းလေးတင်ပေးလိုက်တော့ လိပ်ပြာဖြူလေးတစ်ကောင် ကိုယ်ပေါ်တစ်ချက်လာဝဲပြီး အနောက်ဘက်ကိုပျံသွားသည်.. ။ ပျံသွားရာလှည့်ကြည့်မိတော့ လိပ်ပြာကိုမမြင်တော့ လူတစ်ယောက်ကိုမြင်သည်..ကော်ဖီဆိုင်ကလူပင်။ သူ့သားဆီလာတာဖြစ်မည်.. အဖြူရောင်ပန်းစည်းတစ်စည်းကိုင်ကာ ၀မ်းနည်းနေပုံရသည်..။ ကျွန်တော်လက်ပြမိတော့ မြင်သွားပုံရသည် လက်ပြန်ပြသည်..။ သူ့ဆီလျှောက်သွားမိတော့ ပန်းစည်းလေးအသာချကာ ကျွန်တော့်ဘက်လျှောက်လာပြီး..
“ဟုတ်ပါတယ်..” ကျွန်တော် လက်အသာလွှဲပြလိုက်သည်...။ အရိုအသေပေးဖို့ဖြစ်ဟန်တူသည်.. အဖေ့အုတ်ဂူဆီ သူလျှောက်သွားသည်..။ အပြန်အလှန်ဆိုသလို ကျွန်တော်လည်း သူ့သားကျောက်တိုင်လေးရှိရာသွားပြီး အရိုအသေပေးမိသည်..။ ကဗျည်းထိုးထားတာကို ဖတ်မိတော့ အတွေးတွေဆူဝေသွားသည်...ရန်ခုန်နှုန်းလည်းမြန်လာသည်..။ ကျွန်တော့်နာမည်သည် ကျောက်တိုင်လေးပေါ်မှာ ရှင်းရှင်းလေးနှင့် ထင်းနေသည်..။ အံ့သြမှုတွေ သိလိုစိတ်တွေ ရင်မှာဗလောင်ဆူနေပြီ.........။ ကော်ဖီဆိုင်ကလူကိုလည်းကြည့်မိတော့ ကျွန်တော့်ကို ငေးမောကြည့်နေသည်...။ ထို့နောက်..
ကျွန်တော်တို့တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက် တင်းတင်းဖက်မိသည်.... ၂ မိနစ် ၄ မိနစ် ၅ မိနစ် အချိန်တွေကြာသွားသည်.. ခံစားမှုတို့ကကြီးစိုးလာတော့ မျက်ရည်တို့သည် စီးကျလေပြီ..အချိန်အပိုင်းအခြားတို့ လွင့်စင်ပျောက်ကွယ်ခဲ့ပြီ........။ ထိုရက်က တိမ်အမှောင်တွေဖုံးနေခဲ့သော ကောင်းကင်သည်.... အမှန်တကယ်ပင်ကြည်လင်ပြာစင်ခဲ့သည်.............................။
Posted by Phyo Evergreen at 2:50 PM 11 comments Links to this post
Labels: ကိုယ်တိုင်ရေး, ခံစားမှူ
ဒီရက်ပိုင်း စိတ်လေနေတယ်.. လေပါတယ် လေပါတယ်... တီဝါကြီးဆီကများ ကူးသွားသလားမသိဘူး..အဟီး။ အတိတ်ကအကြောင်းတွေ ကိုယ်လုပ်ခဲ့တဲ့အမှားတွေ ပြန်သတိရနေတယ်.. ညစ်တယ်နော်..။ စာတစ်ပုဒ်ရေးဖြစ်ပါတယ်.. ရေးရင်းနဲ့ မုဒ်ကမလာတော့ ရေးတာ သုံးရက်လောက်ကြာ..။ လာလည်သူများကို တကယ်အားနာပါတယ်... အသစ်မရှိလို့..။ ဒီနေ့ စိတ်ပေါက်ပေါက်နဲ့ တရုတ်မင်အိုးတစ်အိုး (၀.၅၅ ပြား) စုတ်တံနှစ်ချောင်း (၀.၄၀+၀.၄၀ ပြား) ၀ယ်ပြီးလျှောက်ခြစ်ပစ်တယ်.. ဘာဖြစ်လဲ.. ပုံတွေထွက်လာတာပေါ့.. ငှင်းငှင်း။
Posted by Phyo Evergreen at 8:14 PM 16 comments Links to this post
အဟား.. ဒီရက်ပိုင်းအစားအသောက်ပို့စ်တွေချည်းတင်နေတာ.. စာဖတ်သူတွေတော့ဘာပြောမလဲမသိဘူး။ အလုပ်များတာကို အကြောင်းပြပြီများများစားပေးနေတာလေ.. အဟက်။ ဒီနေ့လည်း ထပ်စားတွားဏော်ဗျာ.. Seafood Udon တဲ့..။
မနေ့ကစားဖြစ်တာက Seafood Don ပါ..။ Don ကိုဘယ်လိုအသံထွက်လဲမသိဘူး.. ဒုံ လား တုံလားမသိဘူး ဆိုင်မှာ မှာတော့ မသဲမကွဲ ရောပြီးတော့အသံထွက်လိုက်တာဘဲ.. ဆိုင်ကလူလည်းပေါက်ပါတယ်.. နှစ်ခါပြောစရာမလိုဘူး။
ဒီမှာ စလုံးကလူတွေ ဂျပန်စာကို တော်တော်များများစားကြ.. ကျောင်းမှဆိုလည်း ဂျပန်ဆိုင်ဆိုလူတွေအုံနေတာဘဲ..။ အပြင်မှာလည်း ဂျပန်ဆိုင်တွေ စားတဲ့သူတွေများပါတယ်..။ ဂျပန်စာကို အနံ့မခံနိုင်တာများတယ်.. ဆူရှီဆို မရဘူး.. ကြိုက်တဲ့သူတွေကတော့ မက်မက်မောမောစားတာဘဲ.။ ဘယ်လောက်ကောင်းကောင်းလေ ကိုယ်မကြိုက်တော့လည်းမစားဘူးပေါ့ဗျာ။ ကျွန်တော်က အစိမ်းမစားတော့ ကြော်ထားတဲ့ဟာနဲ့ပဲစားတယ်.. ကြော်ထားတာတောင် ညှီချင်နေသလိုဖြစ်နေတာ။
ဆိုင်မှာ အဲဒီ့ ဒုံကို ပင်လယ်စာ၊ကြက်သား ၊ ငါး တို့နဲ့ရပါတယ်.. ။ တစ်ခြား curry rice၊ ဆူရှီ ၊ Teriyaki chicken၊ ငါးကင်နဲ့ ထမင်းတို့လည်းရတယ်..။ Kofu မှာစားတာပါ..။ ကျွန်တော်စားတဲ့အထဲမှာတော့ ပုဇွန်ကို တင်ပူရာလိုမျိုး ကြော်ထားတာရယ်.. ငါးအကွင်းတွေရယ်.. ပြီးတော့ ကဏန်းလက်မပါပါတယ်.. ။ လက်မသာဆိုတယ်. တကယ်ကအသားအစစ်မဟုတ်ပါဘူး.. fish ball ပုံစံမျိုးကြိတ်ထားတာပါ..။ အစာပလာတွေအောက်မှာ ထမင်းပါတယ်.. ပြီးတော့ ဂေါ်ဖီချဉ်ပါတယ်...။ ထမင်းကို ဆော့စ်အညိုတစ်မျိုးဆမ်းထားပါတယ်.. ထမင်းစေးစေးလေးနဲ့ စားလို့ကောင်းတယ်.. ထမင်းချည်းဘဲတောင်ကောင်းတယ်.။ မိဆော ဟင်းချိုလည်းပါတယ်.. မကြိုက်ဘူး..။ တကယ်တော့ စမ်းစားကြည့်တာ.. မဆိုးဘူးလို့ ပြောလို့ရတယ်.. ကြည့်လိုက်ရင်နည်းတယ်လို့ထင်ပေမယ့် တကယ်စားကြည့်တော့ ဗိုက်ပြည့်ပါတယ်..။ နောက်ကြုံရင် စားကြည့်ကြပေါ့ဗျာ..။ “အစားအသောက်သည် လူနှင့် တည့်၏” ဟူသောအဆိုအား ရာနှုန်းပြည့်ထောက်ခံပါသည်။
Posted by Phyo Evergreen at 10:48 AM 11 comments Links to this post
Pepper Rice and Bugis Junction
ဒီရက်ပိုင်း အလုပ်နည်းနည်းများလို့ စာသိပ်မဖတ်ဖြစ် ပို့စ်လည်းမတင်ဖြစ် လိုက်လည်းမလည်ဖြစ် ပြန်လည်မနှုတ်ဆက် ဖြစ်ခဲ့ပါ..။ နောက်တစ်ပတ် deadline ဆိုတော့ ကြုံးရုန်းလုပ်နေရတယ်..။ နည်းနည်းပင်ပန်းပြီး.. အိပ်ရေးလည်းမ၀အိပ်ချင်သလိုဖြစ်နေတာများတာကြောင့် ကိုယ့်ကိုကိုယ်သနားပြီး စိတ်ပြေလက်ပျောက်နဲ့ အပြင်ထွက် ညနေစာစားဖြစ်ပါတယ်..။
ဒီနေ့ စားဖြစ်တာကတော့ Pepper Rice ပါ.. ဆိုင်ခွဲတွေရှိပေမယ့် Bugis Junction မှာဘဲစားဖြစ်တယ်.. စားပြီးတော့လျှောက်လည်လို့ရတယ်လေဗျာ။ စားရင်း ငေးရင်း စားရင်းပေါ့..အဟား။ Pepper Rice ကိုတော့ ဒီကလူတွေတော်တော်များများစားကြတာတွေ့ရတယ်.. စားလို့လည်းကောင်းတယ်။ သူက အပူပေးထားတဲ့သံပြားကြီးပေါ်မှာ ထမင်းကိုထည့် ဘေးမှာ အသားအစိမ်းကိုငြုပ်ကောင်းဖြူးပြီးထည့်ပေးပါတယ်..။ အပေါ်မှာတော့ ကြက်သွန်မြိတ်၊ ပြောင်းဖူးစေ့နဲ့ ချိစ်ပါပါတယ်..။ ချိစ်က မထည့်လည်းရတယ်... ထည့်ရင်တော့ ပြား၇၀ ပိုပေးရပါတယ်..။ ချိစ်ထည့် မှ ချိစ်ကအမျှင်လေးတွေနဲ့ ထမင်းက စေးစေးလေးဖြစ်ပြီးပိုစားကောင်းပါတယ်။ အရံအနေနဲ့ကတော့ ဟင်းရည်တစ်ခွက်ပေးပါတယ်. .ဘာလဲတော့မသိဘူး..မကြိုက်ဘူး။
ရရချင်းဆိုရင်တော့ ပူလို့ခြစ်ခြစ်မြည်ပါတယ်.. အသားတွေကအစိမ်းဆိုပေမယ့် ထမင်းတွေနဲ့ ရောနယ်ရင်း နယ်ရင်းကနေ သံပြားပူပူပေါ်မှာ တဖြည်းဖြည်းကျက်သွားပါတယ်..။ အမဲသား၊ salmon ငါး ၊ ကြက်သား.. ပြီးတော့ ထမင်းမပါဘဲအသား သို့မဟုတ် ငါးနဲ့ ပဲပင်ပေါက် ကြက်ဥတို့နဲ့စားရတာလည်းရှိပါတယ်..။ ကျွန်တော်က အမဲသားမစားလို့ ကြက်သားနဲ့ပဲစားခဲ့တယ်.. စားရတာနည်းနည်းတော့အီတယ်.. လိမ္မော်ရည်လေးနဲ့ ဆိုရင်တော့ အဆင်ပြေမှာပါ..။ ခုနပဲစားခဲ့တယ်.. ဒုတိယပုံပြန်ကြည့်ရင်းနဲ့ ထမင်းတွေကြားထဲခုန်ဝင်ပြီး စားလိုက်ချင်တယ်.. .. အစား..အစား..။
စားပြီးသောက်ပြီးတော့ ကင်မရာလေးနဲ့ ဒီလိုလက်ဆော့မိပါတယ်..။
Shopping Mall အတွင်းဘက်
Posted by Phyo Evergreen at 7:28 PM 11 comments Links to this post
Labels: ဓာတ်ပုံ, အစားအသောက်
ဖြစ်ခဲ့ ရခဲ့ ပိုင်ဆိုင်ခဲ့တဲ့
ပီတိ ခွန်အား ကြီးမြတ်မှုတွေနဲ့လေ
Posted by Phyo Evergreen at 6:26 PM 15 comments Links to this post
ကိုတောင်ပေါ်သားကတက်လာပါတယ်.. ကိုယ်ကြိုက်တဲ့ပို့အကြောင်းအရာတစ်ခုကို ပြန်လည်ခံစားဖို့ပါ..။ အဲဒါနဲ့ပြန်ရှာကြည့်တော့မှ ရော်....ခက်ပြီ။ ရှာကြည့်တော့ကောင်းကောင်းကန်းကန်းကလည်းမရှိ.. သူများတွေရေးထားတာတွေဖတ်ကြည့်တော့လည်းကောင်းနဲ့ သိသွားပါတယ်..ကိုယ့်ကိုကိုယ်ညံ့မှန်းပါ..။ ကြိုးစားပါအုံးမည်..ခုတော့ ကိုယ့်ဟာကိုကောင်းတယ်လို့ထင်တဲ့ မမေ့နိုင်မိုးကိုတင်ဆက်ချင်ပါတယ်.. မပြီးသေးပါ..ဆက်ရေးသွားပါ့မယ်..။
Posted by Phyo Evergreen at 10:09 AM 1 comments Links to this post
မနေ့ညနေက စားဖြစ်တဲ့ညစာပါ..။ Mini Wok Noodle တဲ့.. ။ စင်္ကာပူကလူတော်တော်များများကတော့ စားဖူးကြလိမ့်မည်..။ ဈေးလည်းသင့်တင့်သလို စားဝပါတယ်..။ လူကြိုက်တော်တော်များလားတော့မသိဘူး.. စားတုန်းကတော့ ဘေးစားပွဲတော်တော်များများမှာလည်းစားနေတာတွေ့ပါတယ်..။ ကျွန်တော်ကတော့ သိပ်အကြိုက်ကြီးမဟုတ်ဘူး.. သာမန်ဘဲ.. တစ်နေ့တစ်နေ့စားရတာတွေရိုးအီလာရင်တော့ အရည်သောက်လေးပါပါတဲ့ ဒီခေါက်ဆွဲကိုစားဖြစ်ပါတယ်..။
ဒီ Mini Wok Noodle မှာ ဆီချက်ခေါက်ဆွဲလိုမျိုးဟာပါတယ်.. ပြီးတော့ဟော့ပေါ့လိုမျိုး အရည်သောက်ပါပါတယ်..။ ခေါက်ဆွဲက မာမာလေးပါတစ်မျိုးစားကောင်းပါတယ်.. ခေါက်ဆွဲကိုအရင်ဆုံးပြုတ်ပါတယ်... ပြီးမှာဆီချက်ရယ်.. ပြီးတော့ အနှစ်တစ်မျိုးထည့်ပါတယ်.. နောက်ဆုံးတော့မှ အပေါ်ကနေပြီးတော့ မှိုနည်းနည်းထည့်ပေးတယ်.. မှိုတော့မကြိုက်လို့ဖယ်စားပါတယ်..။
အရည်သောက်ကတော့ ဟော့ပေ့ါလိုမျိုးအိုးလေးနဲ့ပါ.. အောက်မှာမီးထွန်းပေးထားပြီး ဟင်းရည်ကိုပူနွေးစေပါတယ်.. စာနေရင်း အေးမသွားတော့ဘူးပေါ့.။ ဟင်းရည်ထဲမှာ အသားလုံး၊ ငါးလုံး၊ fish cake၊ ကဏန်းချောင်း၊ အရွက် နဲ့ ကြက်ဥတို့ပါပါတယ်..။ ပုံထဲမှာတော့ ကြက်ဥကအောက်မှာမြုပ်နေတယ်..။
အကုန်လုံးအပြုတ်တွေချည်းပါဘဲ... ဆီဆိုလို့နည်းနည်းလေးပါပါတယ်..။ ကြော်ငြာပေးနေတာတော့မဟုတ်ပါဘူး.. စာဖတ်သူတွေလည်းတစ်ခါတစ်လေ အစားအသောက်တွေစားတာ ထပ်လာလို့ ရိုးအီလာရင် အသစ်အဆန်းလေးတွေစမ်းကြည့်လို့ရအောင်ပါ... ကြုံရင်စားကြည့်ပါ.. ကောင်းမကောင်းကိုတော့ ဒီမှာလာပွားကြပေါ့.. အဟက်..။ ဆားမချက် သကြားမချက် ငံပြာရည်မချက် ပျားရည်မချက် အမှန်အကန်ကိုရေးပါသည်..။
(ပုံတွေကကိုယ်ပိုင်ပုံတွေပါ.. လုပ်ရမှာပျင်းလို့ စာမထည့်တော့ဘူး..ဒီမှာဘဲရေးလိုက်တော့မယ်..
Posted by Phyo Evergreen at 4:57 PM 16 comments Links to this post
Angel ဆိုတဲ့သီချင်းနဲ့ တစ်စုံတစ်ယောက်ကို ရည်ညွှန်းချင်ပါတယ်.. အမြဲနားထောင်ဖြစ်တဲ့ အကြိုက်ဆုံးသီချင်းတစ်ပုဒ်ပါ။ စာဖတ်သူတွေကို လည်းမျှဝေခံစားချင်လို့ပါ..။ သီချင်းနားထောင်ပြီးတိုင်း စိတ်ငြိမ်းချမ်းမှုလေးရပါတယ်။ သီချင်းစာသားပါဖော်ပြပေးထားပါတယ်.။ ကိုရွာသားက ဘာသာပြန်ပေးပါဆိုလို့ မတတ်တခေါက်နဲ့ ပြန်ပေးလိုက်ပါတယ်.. ဖတ်ရတာအဆင်မပြေဖြစ်ရင် ခွင့်လွှတ်ကြပါ...။
သွေးကြောထဲကနေ အတိတ်တို့ စိမ့်ထွက်စီးဆင်းလာတာများ
ငြိမ်းချမ်းမှုတစ်ချို့ ဒီညမှာ ရှာတွေ့ဖို့လေ..။
လှည့်ကြည့်တိုင်း သူခိုး လင်းတတွေနဲ့မို့
"Angel - Sarah McLachlan"
Posted by Phyo Evergreen at 9:48 AM6comments Links to this post
အစ်ကိုတော် ကိုမျိုး ကခင်မင်မှုနဲ့ ဘယ်လိုအိပ်ရာထတဲ့အကြောင်းရေးပေးဖို့ တက်ဂ်လာတဲ့အခါ ဂလိုဂလိုထပါတယ်ဆိုတဲ့ ဒီပို့စ်လေး ရေးဖြစ်သွားပါတယ်..။ ကိုမျိုးရေဖတ်ကြည့်ပါဗျာ.. လာလည်တဲ့သူတွေလည်းဖတ်လို့ရပါတယ်။
မနက်အိပ်ရာဘယ်လိုထတဲ့အကြောင်းပြောရမယ်ဆိုရင် တစ်ထောင့်တစ်ညပုံပြင်တွေသာအမြှုပ်ထွက်အောင်ပြောပြလိုက်ချင်ရဲ့ဗျာ..။ ဟီး ထုတော့ ကိုမျိုးလုပ်လို့ ပေါင်လှန်ထောင်းရတော့မယ်..။ ဘာလို့လဲတော့မသိဘူး.. ငယ်ငယ်ကသိပ်ပြီးအအိပ်မမက်ဘူး အိပ်ခိုင်းမှာတောင်ကြောက်နေတယ်.. ခုတော့လားဘယ်အချိန်အိပ်စေချင်လဲ.. ကြိုက်တဲ့အချိန်ပြောရတယ်။ ခုပဲနိုး.. ခုပြန်အိပ်ရင်တောင်ရပါတယ်.. ဒါကြောင့် ၁၀ တန်းစာမေးပွဲဖြေခါနီးတုန်းက အိပ်လွန်းလို့ အမေကအိပ်သာအိပ် စာတော့မကျက်ဘူး စာမရလို့ စာမေးပွဲကျလည်း မကယ်ဘူးလို့ ထနထနကြောပါတယ်။ ဆင်အော်မနိုးတဲ့.. ကောင်းပါ့..။
အိပ်တဲ့အကြောင်းနဲ့တင်ဘယ်ပြီးမလဲ.. အိပ်ရာထတဲ့အကြောင်းပါပြောမှ ပိုကောင်းမှာမဟုတ်လား..။
မနက်မနက် အိပ်ရာထဖို့ဆိုနာရီသံပတ်ပေးရပါတယ်.. alarm ပေးတာကိုပြောတာ။ နံနက်ကျတော့ နိုးစက်ကအချိန်ရောက်လို့မြည်တော့တာပေါ့လေ..။ အစတော့ နိုးတယ်.. နောက်တော့ ပြန်ပိတ်ပြီးအိပ်တယ်.. အဆိုးဆုံးကတော့ နောက်ပိုင်း ကိုယ့်ဘာသာကိုယ်နိုးစက်ပိတ်လိုက်တာတောင်မသိဘူး.. ။ နိုးမှသိတယ်.. နိုးစက်ကဘဲမမြည်တာလား.. က်ုယ်ကပဲပိတ်လိုက်တာလား.. ဇဝေဇ၀ါ(တေးရေးဇ၀ါမဟုတ်စ်)တွေကိုဖြစ်လို့..။ အဲသလိုရှိတယ်...။
နောက်တော့ ဖုန်းလေးနဲ့ alarm ပေးပြန်ရော..။ သီချင်းသံစဉ်လေးတွေနဲ့ပေါ့.. ကိုယ်ကြိုက်တဲ့သီချင်းလေးတွေကို alarm မြည်တဲ့အခါအသံထွက်လာအောင်လုပ်ထားတယ်...။ ကြိုက်တာကသီချင်းအေးအေးလေးတွေဆိုတော့ မနက်ဆိုမနိုးပြန်ဘူး..အသံကတိုးနေတော့ မြည်တာတောင်မသိလိုက်ဘူး..။ အဟဲဘယ်ရမလဲ.. နောက်တော့ Rihana တို့ ဖြူဖြူအာပြဲ..အဲလေ. ဖြူဖြူကျော်သိန်းသီချင်းတွေ ပြောင်းလိုက်တော့ နိုးတော့တာပေါ့..ကြည်ကြည်လင်လင်ပဲ.. အဆိုတော်တွေက အသံအား ကောင်းတယ်လေ..အဟက်..။ အဲလာ အဲလာ အေး အေး အမ်ဘရဲလားဆိုတဲ့ အသံကြီးကြားရင်နိုးတော့တာဘဲ..။ ဒါလည်းရမလားလို့စမ်းကြည့်တာပါ.. တစ်ပတ်လောက်ကြာတော့ သီချင်းကိုနားယဉ်နေတော့ မနိုးပြန်ဘူး.. ထနထန သီချင်းပြောင်းရတယ်..။
နောက်ဆုံးအဆင်ပြေဆုံးနည်းလေးကို တွေ့ပါတယ်.. နိုးလည်းနိုးတယ်.. ပြန်လဲမအိပ်ဖြစ်တော့ဘူး..။ ပြောမယ်.. သီချင်းဆူဆူလေးကို alarm လုပ်ထားပြီးတော့ စာကြည့်စားပွဲရဲ့ အစွန်ဆုံး..အိပ်ယာထဲကနေမမှီ နိုင်တဲ့နေရာမှာထားပြီးအိပ်ပါတယ်..။ မနက်မြည်တော့ အသံကလည်းဆူ.. မှီကလည်းမမှီနဲ့ အိပ်ယာထဲကနေထ စားပွဲဆီသွား ပြီးအသံပိတ်ရပါတယ်..။ နိုးလည်းနိုးသွားပြီ.. ပြန်လည်းမအိပ်ချင်တော့ဘူး.. ပြီးမှရေမိုးချိုး မျက်နှာသစ်ပြီး.. လုပ်စရာရှိတာဆက်လုပ်ပါတယ်..။
အိပ်ရာထတဲ့အကြောင်းကတော့ ဂလိုဂလိုပါဘဲ ကိုမျိုးရေ.........
Posted by Phyo Evergreen at 7:24 PM5comments Links to this post